DNA okwu anwansi nke na-edozi onu ogugu na igbu onwe ya! : Martin Vrijland
gbara akwụkwọ Gbanwee NICKY, OZI OZI	by Martin Vrijland	na 30 August 2018	• 3 Comments
DNA bụ ụzọ ọhụrụ nke ndị uweojii na ikpe ziri ezi na onye ọ bụla jupụtara otuto! Na DNA ị nwere ike idozi ihe niile. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na onye agbata obi gị hụrụ anwụ ma DNA dị na uwe ya, anyị maara ozugbo onye onye ahụ gburu! Nke ahụ bụ n'ezie ihe ịmepụta nke ọganihu nkà na ụzụ nke a na-enwetụbeghị ụdị ya.
Ihe mepụtara nke wiilị, ígwè ụgbọ mmiri, ọkụ eletrik na Intanet bụ ọganihu, ma DNA nwere ike ịbụ ihe kachasị na-agbagha. N'ihi DNA a, anyị maara 100% na Jos Brech bụ onye na-egbu ma na-akwa iko Nicky Verstappen. Ya mere, ọ bụ ọkpụkpụ ọṅụ site na ụmị na ezinụlọ Nicky emesịrị doo anya. I nwere ike iche n'echiche na nne chọrọ ile onye na-egbu egbu anya n'anya!
Kedu otu ọrụ a, DNA ahụ?
Nke a bụ eziokwu, onye ọ bụla nwere koodu pụrụ iche, dị ka ihe na-emepụta ihe na kọlụm na ngalaba dị iche iche. Ya mere, DNA pụrụ iche maka onye obula. Dịka ọmụmaatụ, ị nwere ike ịchọta nko dị n'etiti nne na nna na ụmụ, n'ihi na mkpụrụ ndụ mkpụrụ ndụ dị ntakịrị ketara, ma DNA anaghị adị n'otu, ma ọ bụghị na ị ga-abụ uwe elekere. Ya mere were ya na ị nwere DNA onye si na nke anọ ma ọ bụ nke ise, ma eleghị anya, a ka nwere ihe ndị yiri ya, mana ahụrịrịrịrịrịrịrịrịrịrịrịrịrịrịrịrịrịrị.
Ekele maka koodu a pụrụ iche, ị nwere ike ịhụ DNA kpọmkwem ma ọ dị onye na-akpakọrịta ma ọ bụ ihe ọ bụla. Nke a nwere ike ịbụ akpụkpọ anụ ma ọ bụ na-ebuchi imi. Ya mere were ya na gi na onye agbataobi gị ga-enwe kọfị taa, mgbe ahụ, ihe gbasara nke a bụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 99,9% ka ị hapụ DNA n'ụlọ ya. Nke a bụ ihe atụ n'ihe ndina ị na-anọdụ ala, na kọfị kọfị ma ọ bụ na uwe onye agbata obi gị, n'ihi na ị nyere ya aka. Ma eleghị anya, ị na-eti ya ihe n'ubu ma enwere mmiri ọkụ ma ọ bụ ọsụsọ n'elu uwe ya.
Ka e were ya na otu onye agbata obi ahụ nwụrụ anwụ n'echi ya n'ụlọ ya, mgbe mama ya gbalịrị iji fon na-agakwuru ya ụbọchị niile. Mgbe ahụ, a ga-ahụ ya nwụrụ anwụ, ma ọ bụ ihe doro anya na ọ nwụghị. Mgbe a na-esiteghị na NFI, ọ na-egosi na ọ dịghị ihe na-egosi igbu ọchụ. Mgbe ha nyochasịrị, ndị uweojii ahụghị ihe ọ bụla nwere ike inye ihe ọ bụla, ma chọpụta DNA gị na uwe na ihe ndina nke onye agbata obi gị.
Nkwuputa nke nkwonkwo na-egosikwaghi ihe ọ bụla na nduzi nwoke na nwanyị, n'ihi ya, ọ dịghị ihe mere ị ga-eji chee na onye agbata obi na-emegbu ya.
Ọ bụ ezie na ndị uweojii akpọrọla gị maka ịjụ ajụjụ iji chọpụta ma ekwuru banyere igbu ọchụ ma ọ bụ mmegbu, a ga-ahapụ gị mgbe ụbọchị 3 gasịrị. Ị nwere ike iku ume na nhụjuanya ọzọ, n'ihi na ị maara na DNA gị hụrụ nanị na onye agbata obi gị, n'ihi na ịnọ na ya na kọfị.
Echere na ị na-enwe mmekọahụ
Ugbu a, a jụọla gị ajụjụ gbasara mmejọ, ebe a kpọrọ gị ka ọ bụrụ onye a na-enyo enyo. Ị nọrọ otu uhuruchi na ụlọ nkwari akụ ebe ahụ n'abalị ahụ enwere okwu mmegbu. Ajujuwo gi ma onodu di iche iche nke okwu ndi ozo gosiri na i nweghi ike itinye aka n'omume a. Ị nọ n'ụlọ nkwari akụ maka njem azụmahịa. Ya mere, a gbahapụrụ gị ma bụrụ onye ikpe na-eme ihe n'ezie. N'agbanyeghị nke a, i tinyela aka n'okwu mmegbu.
DNA dị ka ihe akaebe
Ihe dị ka otu ọnwa ka e mesịrị, ị na-agbanye telivishọn gị ma na-ekiri na zap ka mgbasa ozi site n'aka Peter R. de Vries. N'ebe ahụ, ị ​​na-ahụ na mberede na ya na nne na agbata obi gị gbara ajụjụ ọnụ. Peter R. de Vries na-akpọ iwu iji jide gị dị ka onye isi na-enyo enyo na ikpe ikpe ọchụ a, n'ihi na a chọtara DNA gị na ụlọ ahụ, ị ​​nwekwara ike itinye aka n'omume rụrụ arụ tupu oge a! Ọ dị iche iche karịa na ị bụ onye na-egbu egbu ma na-agbapụta agbata obi gị!
Ị na-ahụ nsogbu ndị ọ nwere chọta DNA ọ bụrụ na ihe ngosi 100% nke ihe a na-atụle? Ịkwado nkwado mgbe niile. Ịnọ ebe ebe apụtaghị na ị bụ onye na-egbu egbu ma ọ bụ onye mmegbu nwoke na nwanyị. Inwe mmekorita nke nwoke na nwanyi aputaghi na ekwesiri gi ikpe na ihe ojoo.
Gini mere DNA ji di oke mkpa?
O yiri ike na nicky Verstappen ikpe bụ PsyOp (ọrụ uche) nke aghaghị iji hụ na Netherlands dum ga-ahụ DNA dịka okwu anwansi ọhụrụ ahụ. Nile Netherlands aghaghị ikwenyesiri ike na ọ dị mma iji DNA si n'aka onye ọ bụla ma tinye ya na nchekwa data nke mba. Ọ ga-abụkwa ihe iwu kwadoro iji nye DNA a ka ọ bụrụ ihe akaebe n'okwu ikpe ọ bụla (ị gaghịzi ezipụ ya n'ụlọ Jos Brech, na ihe efu ma na-echegbu onwe gị banyere ya n'ezie iwu akwadoghị).
A ga-atụ anya na ị ghọwo ihe doro anya na nke a n'elu na ịchọta DNA anaghị ekwu ihe ọ bụla gbasara mpụ. N'ihe banyere Nicky Verstappen, ọmụmaatụ mgbe akụkọ NFI na-egosi na e gburu ya. Ọzọkwa, ọ dịghị ihe akaebe na-egosi na enwere mmegbu. Ya mere, ọ bụ ya mere ị ga-eji tụnyere ihe ị kọwara n'elu ya na onye agbata obi gị.
Ịchọrọ ịkwụsị n'ọnọdụ dị otú ahụ n'ọdịnihu? Ọ bụrụ na iwu ọhụrụ ahụ siri ike - ekele maka okwu a nke mediahype na emobuilding site Peter R. de Vries - na-abịa, ị ghaghị ịkpụzi ogwe ntutu na globa mgbe ị na-aga kọfị na onye agbata obi gị.
Enwere ike ịnwe ihe ndị ọzọ mere eji etinye data nchekwa DNA site na PsyOp? O nwere ike ịbụ na e nwere ihe jikọrọ iwu nke ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa nke chọrọ ịba? Mgbe ahụ gụọ isiokwu a kwenye.
Tags: 100%, ihe akaebe, code, DNA, familie, agba, Jos Brech, egwuregwu, mmegbu, ụba, Nicky Verstappen, Peter R. de Vries, mmekọahụ, arụ ọrụ, ikpe
30 August 2018 na 10: 42
1 September 2018 na 08: 29
Nke a ga-abụ ihe a chọrọ ịgụ maka ndị na-enweghị ike iche maka onwe ha (99% nke Dutch).
2 September 2018 na 21: 50
gronz23: Kọwaara onye a na-akwachi akwacha, ọtụtụ n'ime ha dị n'ime ya. Ha na-atụgharị ya na nkwụsị na n'ikpeazụ gwa gị na gị onwe gị ejiriwo ihe ma ọ bụ na-apụ kpamkpam na map ahụ. Ọtụtụ mgbe m na-anụ na m na-eche mgbe niile na ha niile bụ ndị na-eme ihe nkiri nakwa na e tinyela ihe nile n'ile. Ha na-achọ ka ha na ndị mgbasaozi kwurịta okwu, ọ bụrụgodị na ị na-enye ha nyocha dị mma na nkọwa na ajụjụ ndị dị mkpa, ma ha onwe ha na-ekwu okwu dị ka ndị na-ahụ maka mgbasa ozi ma kọọrọ gị kpọmkwem ihe akụkọ ahụ gwara ha ihe gị onwe gị kwesịrị ikwere dịka atụrụ. Maka, dị ka mgbasa ozi si kwuo, ọ ga-abụ naanị eziokwu ahụ, ọ dịghị ihe ọzọ nwere ike ime. Ụjọ n'ihi na hypnosis na rasti rocelli na lemon bụ kpọmkwem ihe ọ pụtara. Ha kwere n'ezie na mkpụrụ osisi ahụ na-atọ ụtọ, ma ọ bụ ihe na-atọ ụtọ, ọbụna ma ọ bụrụ na ị gwa ha na ọ bụ lemon, ha na-ekwu na ị bụ onye nzuzu. Mgbe ụfọdụ, ọ bụkwa ego na e nwere ụfọdụ akụkọ, onye nke ọzọ apụghị ịbụ ihe ziri ezi ma e wezụga m.
" Ime ogbu mmadu na Nicky Verstappen - Jos Brech PsyOp
Mmekorita nwoke na nwoke na nwanyi di na nwunye »
Nleta nile: 14.666.143